June 10, 2021 - Khitalin Media
June 10, 2021 by Khitalin Media
ဟိုတယ် အခန်း နံပါတ် (၃၉) (မိန်းကလေးများ မဖတ်ရ)
ဟိုတယ် အခန်း နံပါတ် (၃၉) (မိန်းကလေးများ မဖတ်ရ) ဖုန်းတွေမပေါ်သေးတဲ့ခေတ် အပြာကားတွေကို ဖုန်းထဲမှာ ကြည့်လို့မရတဲ့ ခေတ်မှာပေါ့…. အရပ်မြင့်မြင့် အသားဖြူဖြူ လူရည်သန့် လူငယ်တျောက် ဟိုတယ်ထဲကိုဝင်လာတယ်။ ကောင်တာရှေ့ရောက် ဟိုတယ်ပိုင်ရှင် သူဌေးကိုမေးတယ်။ man – အခန်းနံပါတ် ၃၉ အားလား…..boss – အားပါတယ်ဗျ….man – ကျွန်တော်ယူလို့ရမလား… boss – ရတာပေါ့ဗျ….man – ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးပါ… လူငယ်က အခန်းထဲမဝင်ခင် ကွန်ဒုံး (၃)ခုရယ် ဓားမြှောင်( ၆ )ချောင်းရယ်…. လက်ဖက်ရည် (၂ )ခွက်ရယ် ရနိုင်မလားလို့ သူဌေးကိုမေးတယ်။ သူဌေးကလဲ ရနိုင်ပါတယ်လို့ သဘောတူလိုက်တယ်။ ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ သူအနဲငယ် အံသြသွားပြီး စိတ်ရှုပ်သွားတာတော့ အမှန်ပဲ။ … Read more
ဘားတခုထဲကနေ အရက်တွေ အရမ်းကိုမူးနေတဲ့ လူတစ်ယောက် အရက်တစ်လုံး နဲ့ ညည့်ဌက်ကလေးတစ်ယောက် ဆွဲပြီး ထွက်လာသတဲ့…. အဲ့ဒီမှာပဲ ဘားအရှေ့မှာ တောင်းရမ်း စားသောက်နေတဲ့ သူတောင်းစား တစ်ယောက်က ဗိုက်အရမ်းဆာနေတဲ့အတွက်ကြောင့် သူ့ကို အစားစားဖို့ ငွေစကြေးစ အနည်းငယ်လောက် စွန့်ကြဲဖို့ အမူးသမားကို တောင်းရမ်းပါတော့သတဲ့…. အဲ့ဒီမှာပဲ အမူးသမားကလည်း ငါ့မှာ ပိုက်ဆံတော့ မကျန်တော့ဘူး… မင်း သောက်ချင်ရင်တော့ ရော့..ငါ့ အရက် သာ သောက်လိုက်တော့လို့ အရက်ပုလင်း လှမ်းပေးရော… အဲ့ဒီမယ် သူတောင်းစားက (ကျွန်တော် အရက် မသောက်တတ်ပါဘူးခင်ဗျ ..ထမင်းစားဖို့ ငွေသာလိုတာပါ) လို့ ပြန်ပြောသတဲ့….. ဟာ….အဲ့ဒါဆိုလည်း ရော့ကွာ..ငါ့ ဆေးလိပ်ဗူး. .တော်တော့.. ပိုက်ဆံတော့ မရှိတော့ဘူး… ဆိုပြီး ဆေးလိပ်ဗူး လှမ်းပေးတော့.. ကျွန်တော် … Read more
နွေရာသီရောက်ပြီဆိုရင် ပူအိုက်လွန်းလို့ အရေပြားတွေယားယံပြီး အိကျီ င်္လက်ရှည်တွေဆို သိပ်ဝတ်လို့အဆင်မပြေပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် အိကျီ င်္ လက်ပြတ်လှလှလေးတွေ ၀တ်နိုင်ဖို့ဆိုရင် ချိုင်းကြားအသားအရေလေး ဖြူဝင်းနေဖို့လိုတာပေါ့နော်။ နည်းလမ်း ၁ သကြား လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း နနွင်းမှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဝက် သံပုရာရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း ပြုလုပ်နည်း ပါဝင်ပစ္စည်းအားလုံးကိုရောလိုက်ပါ။ ပြီးရင် ချိုင်းကြား ၊ ဒူးခေါင်း၊ တဒေါင်ဆစ်နဲ့ တခြားညိုမဲနေတဲ့ နေရာတွေမှာလိမ်းလို့ရပါတယ်။ ၅ မိနစ်လောက် ပွတ်လိမ်းပေးပါ။ ဆဲလ်သေတွေကိုဖယ်ရှားပေးပြီး ညိုမည်းတာကိုသက်သာစေမယ့်အပြင် ချွေးပေါက်ပွင့်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးရင် ရေအေးနဲ့ ဆေးချပါ။ တစ်ပတ်ကို ၃ ကြိမ် တစ်လလောက်လုပ်ပေးပါ။ နည်းလမ်း ၂ သကြား လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း မှုန်ဖုတ်ဆိုဒါ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း … Read more
အချစ်ရေးကံမကောင်းဘူးဆိုပြီး စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါနော်…
အချစ်ရေးကံမကောင်းဘူးဆိုပြီး စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါနော်… တစ်နေ့မှာ လူတစ်ယောက်သင့်ဆီ ရောက်လာလိမ့်မယ်။ သူက သင့်ရဲ့အရာရာကို လက်ခံလိမ့်မယ် …။ သင့်ကို အများကြီး ဂရုစိုက်လိမ့်မယ် ။သင့်ကို ကာကွယ်ပေးလိမ့်မယ် ။သင့်ကို အလုံးစုံ နားလည်နေလိမ့်မယ် …။ သငျ့အမှားတှကေို အပွဈမမွငျ၊အပွဈမ တငျဘဲ သဘောထားပွညျ့ဝစှာ နဲ့အမှနျပွငျပေးပါ လိမျ့မယ် …။ သူရှိတယ် လို့ တွေးလိုက်ရုံ နဲ့အရာရာ ပြီးပြည့်စုံ သွားသလိုသင် ခံစားရ လိမ့်မယ် ။ သူက သင့်စိတ်၊ သင့်ခံစားချက်တွေ ကိုလုံခြုံစေပါ လိမ့်မယ်။သင့်မျက်နှာကို မြင်နေရရုံ နဲ့သူ ပြုံးပျော်နေ လိမ့်မယ်။ သင့်ကို အချိန်ပေးဖို့သူ အမြဲ ကြိုးစားနေ ပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ သံသယသေးသေးလေးအတွက်သူကတော့ အများကြီး ရှင်းပြပါ လိမ့်မယ်။ သင့်စိတ်နဲ့ပဲ … Read more
သင့်ကို ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိလာစေမယ့် အမူအကျင့်များ…
လူတစ်ယောက်ဆွဲဆောင်မှုရှိမရှိဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ ရုပ်အသွင်အပြင် ပုံပန်းသဏ္ဏန်နဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ ပြောချင်တာက သင့်ခန္ဓာကိုယ်က ဝနေလို့၊ ပိန်နေလို့၊ ရုပ်ဆိုးနေလို့၊ စတိုလ်က ဂွမ်းနေလို့ အစရှိသဖြင့် ဒီလိုအပြင်ပိုင်း ပုံပန်းသဏ္ဏန်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ် မရှိဘူးဆိုတာ သင့်ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား၊ သင့်ရဲ့အပြုအမှု၊ သင့်ရဲ့ပုံစံပေါ်မှုတည်ပြီး ဆုံးဖြတ်ပေးတာပါ။ ဒါကြောင့် သင့်ကိုပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိလာစေမယ့် အမှုအကျင့်တွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁. ပွင့်လင်းပါ၊ အစစ်အမှန်ဖြစ်ပါစေ ပွင့်လင်းပါဆိုတာ နေရာတိုင်းကို အကုန်လုံးလိုက်ပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနေပါ၊ပြောပါမျိုးမဟုတ်ပါဘူး ဥပမာ – ပိုက်ဆံမချမ်းသာပေမယ့် ပိုက်ဆံရှိချင်ယောင်ဆောင်တာမျိုး၊ အမှားလုပ်မိပေမယ့် မသိချင်ယောင်ဆောင် ဝန်မခံတာမျိုး ဒါတွေက သူများသိသွားရင်လည်း မကောင်းသလို သင့်ရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုကိုပါ လျော့ကျစေပါတယ်။ ပြောချင်တာက သင့်အရှိအရှိတိုင်း ပုံစံအစစ်အမှန်ကိုချပြပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနေပါ။ အဲ့လိုနေခြင်းက လူတွေသင့်ကို ပိုလေးစားလာပြီး ဆွဲဆောင်မှုလည်းရှိလာမှာပါ။ ၂. … Read more
Bollywood ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီး အမီးရ်ခန်းရဲ့လေးစားစရာစိတ်ဓာတ်ကလေး
အမီးရ်ခန်း နှင့် ဂျုံမုန့်ထုပ် Suprise လေးများ… Bollywood ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီး အမီးရ်ခန်းက ဒေလီမြို့ပေါ်မှ အ ခက်ခဲရှိတဲ့သူတွေအတွက်ဂျုံအိပ်တွေများစွာထုတ်ပိုးထားပြီးလာယူစေခဲ့ပါတယ်… အချို့တွေက”ဒီလောက်ချမ်းသာတာဂျုံမုန့်ပဲပေးစရာလားတဲ့? ! ဒါကြောင့်သွားမယူခဲ့ကြသူတွေလည်းများစွာရှိခဲ့ပါတယ် ။ စိတ်ဝင်စားစရာလေးတစ်ခုကတော့…… အတော်လေးကို ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကတော့ သွားယူပြီးအိမ် ပြန်ရောက်လို့ မုန့်လုပ်ဖို့အိပ်ဖွင့်လိုက်ချိန်မှာ (အိပ်ထဲမှဂျုံမုန့်အကြား) ရူပီး ၁၀၀၀၀(နှစ်သိန်းခန့်) သေချာစွာထည့်ထားပေးတာကိုဂျုံအိပ်သွား ယူသူတွေရရှိသွားခဲ့ပါတယ် !🌎 ဘာကြောင့်အဲ့ဒီလိုလုပ်တာလဲမေးတော့ “တကယ်ကိုလိုအပ်သူတွေရ စေချင်တာပါတဲ့ ! (Shan) Unicode အမီးရျခနျး နှငျ့ ဂြုံမုနျ့ထုပျ Suprise လေးမြား… Bollywood ရုပျရှငျမငျးသားကွီး အမီးရျခနျးက ဒလေီမွို့ပျေါမှ အ ခကျခဲရှိတဲ့သူတှအေတှကျဂြုံအိပျတှမြေားစှာထုတျပိုးထားပွီးလာယူစခေဲ့ပါတယျ… အခြို့တှကေ”ဒီလောကျခမျြးသာတာဂြုံမုနျ့ပဲပေးစရာလားတဲ့? ! ဒါကွောငျ့သှားမယူခဲ့ကွသူတှလေညျးမြားစှာရှိခဲ့ပါတယျ ။ စိတျဝငျစားစရာလေးတဈခုကတော့…… အတျောလေးကို ဒုက်ခရောကျနတေဲ့သူတှကေတော့ သှားယူပွီးအိမျ ပွနျရောကျလို့ မုနျ့လုပျဖို့အိပျဖှငျ့လိုကျခြိနျမှာ (အိပျထဲမှဂြုံမုနျ့အကွား) … Read more
ထယ်သွား၌ ကပ်မြေကြီးအစွမ်း ဖြည့်စွက်ပါသည် “အောင့်တယ်…အောင့်တယ်”ဟူ၍အော်နေသော မောင်ကျော်မိုး၏ အော်နေသောအသံသည် စူးနစ်စွာထွက်ပေါ်လာ၏ မောင်ကျော်မိုး၏ဖခင်နှင့်အကိုဖြစ်သူတို့မှာ ခြေမကိုင်မိလက်မကိုင်မိဖြစ်နေကြသည်။ မောင်ကျော်မိုး၏အော်သံမှာလည်းပို၍ကျယ်လာပြီး အော်သံစိပ်လာသဖြင့် အ်ိမ်နီးချင်းများမှအားလုံးဝိုင်းအုံလာကြသဖြင့် ဘသူတို့အိမ်တွင်လူများပြည့်ကျပ်သွားသည်။ တစ်ယောက်ကပြေးခေါ်သဖြင့်ဗိန္နောဆေးဆရာကြီး ဦးဖြူသီးရောက်လာပြီး တိုင်းရင်းဆေးများတိုက်ကြွေးသော်လည်း အအောင့်ကမပျောက်သဖြင့်မြို့ဆေးရုံသို့ပို့ရန်အကြံပေးကြလေသည်။ ထိုအချိန်မှာပင် ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ဦးသုတဆွမ်းခံကြွလာ၏ အိမ်ထဲသို့ဝင်လိုက်သည်နှင့်မောင်ကျော်မိုးမချိမဆန့်အော်လိုက်သောအသံများကဆီးကြိုလျက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သပိတ်ချပြီး လူနာထံကြွသွား၏အသင့်ခင်းထားသောနေရာပေါ်ထိုင်ပြီးသည်နှင့်အကျိုးအကြောင်းမေးလေ၏ “မောင်ကျော်မိုးဘာရောဂါဖြစ်တာလည်း”ဟုမေးလေသည် မည်သူမှဦးဆောင်၍ဖြေသူမရှိ မောင်ကျော်မိုး၏ဖခင်မှ ဗိုက်အောင့်တာပါဘုရားဟုဖြေးဖြေးလေးပြန်လျှောက်၏ ဆရာတော်မှ“ရောဂါကြောင့်လား မတည့်စာ စားမိလို့လား” ထိုအမေးကို မည်သူမှဖြေသံမကြား သူတို့မျက်နှာများမှာဘကြောက်လန့်နေသည့်လဏ္ခာတွေ့ရသည် ထိုအချိန်မှာပင် မောင်ကျော်မိုး၏အကိုဖြစ်သူမှရဲဝံ့စွာ “ဝေဒနာကြောင့်ပါဘုရား ဝေဒနာမှရိုးရိုးဝေဒနာမဟုတ်ပါဘုရား” “ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုဝေဒနာမျိုးလည်းကွဲ့” “အောက်လမ်းဆရာလုပ်ထားတာပါဘုရား” “ဒါကိုဘယ်လိုသိရတာလည်းကွဲ့” “တင်ပါ့ခုမနက်ပိုင်းမောင်ကျော်မိုးဦးသာဒင်ရဲ့အိမ်ရှေ့ကအဖြတ် ဦးသာဒင်မွေးထားတဲ့ခွေးကညမောင်ကျော်မိုးကိုလိုက်ပြီးဆွဲပါတယ် အဲ့ဒီမှာမောင်ကျော်မိုးက အုတ်ခဲပိုင်းနဲ့ပစ်လိုက်တာ ခွေးနှာနုရိုးကိုထိပြီးအော်ပြေးပါတယ်။ ဦးသာဒင်က သူ့ခွေးအော်သံကြားတော့ ခြံအပြင်ထွက်လာပြီးမောင်ကျော်မိုးနောက်ကျောကို လက်ညှိုးနဲ့ထိုးပြီးမြေကြီးကိုသူ့ဖနောင့်နဲ့ပေါက်လိုက်တာ တဖက်ကလာနေတဲ့တပည့်တော်ကိုယ်တိုင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်ဘုရား” “အဲ့ဒါနဲ့မောင်ကျော်မိုးအိမ်ရောက်ပြီးအခုလိုအောင့်ပြီ လူးလိမ့်နေတာပါပဲဘုရား”ဟုလျှောက်လေသည်။ “ဆရာတော်ကအနည်းငယ်စဉ်းစားပြီး” “ဒါဆိုဖြစ်နိုင်တယ် ဦးသာဒင်အရင်လူတွေကိုရောအခုလိုလုပ်ဖူးလား” “လုပ်ဖူးပါတယ်ဘုရား … Read more
သင့်ရဲ့ဆံပင်မှာ ဗောက်ထခြင်း ကင်းဝေးစေဖို့အတွက် သိထားရမယ့် အရာများ
သင့်ဆံပင်မှာ ဗောက်တွေရှိလို့ တစ်ချိန်လုံးခေါင်းတကုတ်ကုတ် ဖြစ်နေရပါသလား။ လူကြားသူကြားထဲသွားတဲ့အခါ ဆံပင်မှာ အဖြုဖတ်တွေ ကပ်နေမှာမို့ မလုံ့မလဲဖြစ်နေရပါသလား။ ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေ ကြုံနေရသူတွေအတွက် ဗောက်ထခြင်းကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့် အချက်ကလေးတွေ ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ၁။ဗီတာမင်ပြည့်ဝတဲ့ အစားအစာတွေကို စားပေးပါ။ ဗီတာမင် အေ၊ဘီ၊ စီ ပြည့်ဝတဲ့ အစားအစာ၊ သီးနှံတွေကို စားပေးပါ။ ဒါဟာ ဆံပင်ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းစေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဆံပင်အတွက်လိုအပ်တဲ့ ဆဲလ်တွေကြီးထွားစေဖို့ သူတို့က အထောက်အကူပြုတဲ့အပြင် ကိုယ်ခံအားပါကောင်းစေတာမို့ သင့်ဆံပင်ဗောက်ထခြင်းကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ စတော်ဘယ်ရီသီးတွေ၊ အစိမ်းရောင်အရွက်တွေ များများ စားပေးပါ။ ၂။ဆံပင်အတွက်သုံးတဲ့ ဘီး၊ ဘရက်ရ်ှတို့ကို သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးပါ။ မျက်နှာပေါ်တင်မယ့် ဘရက်ရ်ှတွေ၊ တို့ဖတ်တွေကို အသစ်လဲပေးတာမျိုး၊ ဆေးကြောသန့်စင်တာမျိုးတွေ သင်လုပ်တယ်မလား။ ဒီလိုပါပဲ။ သင့်ဆံပင်ကို ပုံမှန်ဖြီးပေးလေ့ရှိတဲ့ … Read more
(အမျိုး သမီးထု တကိုယ်ရေးသန်ရှင်းကျမ္မာရေးအတွက် လွန်စွာအရေးကြီးလို့ ရှက်စရာလို့မယူဆဘဲ၊ဒီသတင်းကို မိမိရဲ့ မိတ်ဆွေ၊ အပေါင်းအသင်းများအား ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်မျှဝေအသိပေးကြပါ) အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ကာလကတ္တားရှိ Tata Cancer Hospital(ခေါ်)ကင်ဆာဆေးရုံ မှ အမျိုးသမီးများအတွက် ကျမ္မာရေးအသိပေးနှိုး ဆော်ထားချက်ကို မျှဝေလိုက်ပါရစေ။ အဲဒီဆေးရုံမှာ သားအိမ်ကင်ဆာ၊ ဆီးအိမ်ကင်ဆာတို့ဖြင့်လာရောက်ကုသမှုခံနေကြတဲ့ အမျိုးသမီးဝေဒနာရှင်များကို ဆေးမှတ်တမ်းပြုစု၍ရောဂါရာဇဝင်ကိုလေ့လာစမ်းစစ်တဲ့အခါမှာ၊ ထိုကင်ဆာဝေဒနာသည်အများစု ဟာ ဓမ္မတာရာသီလာတဲ့အခါ pad(ခေါ်)လစဉ်သုံးပစ္စည်းကို အတွင်းခံဘောင်းဘီမှာ အချိန်ကြာမြင့်စွာထားပြီး၊ တော်တော်နဲ့ အသစ်လဲလေ့မရှိခဲ့ကြတာကို အဖြေရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ရာသီသွေးဆင်းတဲ့အခါ အတွင်းခံဘောင်းဘီမှာ ကပ်ထားတဲ့pad(ခေါ်)လစဉ်သုံးပစ္စည်း က အပြင်အဝတ်အထည်တွေကို မစွန်း ထင်းစေဖို့စုပ်ယူထိန်းထားပေးလေ့ရှိပါတယ်။ pad တွေကို ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့ဖန်တီးပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့်သာ၊ အခုလို ရာသီသွေးရည်များနဲ့အစိုဓာတ်ကို အချိန်ကြာကြာ စုပ်ယူုထိန်းထားနိုင်တာပါ။ ဒါပေမယ့်အချိန်တော်တော်ကြာ စုပ်ယူပြီးနောက် မှာတော့ pad မှာပါတဲ့ဓာတုပစ္စည်းများပျက်ပြယ်ကာ အထဲမှာစုပ်ယူထိန်းပေးထားတဲ့သွေးပုပ်များကိုဓာတ်ပြောင်းလဲစေပြီး၊ အနီရောင်မှ အစိမ်းရောင်မှိုဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ထိုမှိုများက … Read more